Pamwedzi mishanu yese iyi, ndakange ndave kutofunga zvangu kuti semuusikana wechidiki kudai, dai ndazviwanirawo andiingadanane naye pavakomana vese vaigarondipfimba pese pandaifamba. Ndaiti ndikasiya mwana ndomboenda kumaclubs, marestaurants, movies, nedzimwe nzvimbo dzekufara, ndainetswa nevakomana vakawandisa vachindida asi ndichiramba hangu semunhu aida kuzvibata uye ndaieve nekacheche.
Asi ndakange ndogaronzwa ropa rangu kupisa nekumhanyamhanya nekuda kukwirwa semunhu akange agarisa. Ndaiti kana ndikarara hope dzainonoka kuuya ndichingofunga makwirigwo andingade kuitwa. Pamwe ndaimbofunga ndichiiswa nerefurefu yakatetepa, pamwe ndombohwa ndichida rino zipfupi zigobvu gobvu. Pamwe ndaimbohwa ndichida kuitwa nekumashure, pamwe ndombohwa ndichida kukwira pamusoro inindega ndonyatsozvibatira mboro ndoipinza mubeche rangu pamadiro. Pamwe ndaitombozwa ndichitoda kuiswa mumhata chaimo.
Pamwe ndaimbofunga zvekuyamwa mboro, pamwe ndombohwa ndichida kunanzviwa clitoris yangu. Ndaiti ndikabatiwa nepfungwa idzi mheche yese yaibva yanyorova, ndozopedzisira ndave kutambisa ndega clitoris yangu. Musi wakauya babavaKudzai pfungwa idzi dzaitenge dvavekunyaya. Kudzai chakanga chichangopedza kuyamwa chikakotsira. Kuyamwa kwachaiita minyatso yangu ndakabva ndavhara maziso ndonzwa kunge ndiri kuyamwiwa nemumwe mukomana andakanga ndaevegwa naye ku dinner kwandakange
ndakange ndohwa kuda kudoitiwa nguva iyoyo.
[Kudzi akasimudziwa ndokunzi mucortbed zvekuti ndakafunga kuti achamuka masimudzirwo aacho, asina haana.
Kuti ndibatanidze magaro akaramba akavhurika nezvakanga zvakaitiwa makumbo angu. Kuti ndiridze mhere, asi hapana chakabuda. Makumbo angu aive akangokandwa pamafudzi, beche rakanyatsovhurwa zvese nemhata. Babakudzi raive rongogomera nechikapa, ukuwo kuchingonzwika machende achirovera pamhata yangu kuti pa, pa, pa, pa, iyo mboro ichipinda nekubuda mubeche kunge piston. Hamheno kuti ndakakwirwa kwenguva yakadii.
Ndakazotanga kuhwa chinenge chiveve here chichitangira mutsoka dzangu, chichikwidza nemakumbo, nemuchiono. Ndopachakazopinda
PREVIOUS POST Previous post: Kusvirwa nebhinya season 1
NEXT POST Next post: Kusvirwa na Landlord